नाङ्गो घाम नुहाउने र यसका मुख्य फाइदाहरु | बेजिया
सुसाना Godoy | 19/06/2022 20:00 | सुन्दरता
अब जब राम्रो मौसम यहाँ छ, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ नग्न सूर्य स्नान। किनभने यो ती अभ्यासहरू मध्ये एक हो जुन बढ्दो रूपमा सिफारिस गरिन्छ र यसमा धेरै फाइदाहरू छन् जुन तपाईंले खातामा लिनु पर्छ। निस्सन्देह, जब हामी आफूलाई घाममुनि राख्छौं, हामीले हाम्रो छालाको हेरचाह गर्न अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ।
त्यसोभए यदि हामीले यो नाङ्गै गर्छौं भने, तपाईंले यसलाई अझ बढी ध्यानमा राख्नु पर्छ। जस्तै शरीरका केही क्षेत्रहरू अरूभन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छन्। त्यसले भन्यो, यो केवल भगवानले तपाईंलाई संसारमा ल्याउनुभएको रूपमा सूर्य स्नान गर्न सक्षम हुनुका फाइदाहरू जान्न बाँकी छ। सायद यस सिजनमा तपाईलाई स्विमसूट छोड्न प्रोत्साहित गरिनेछ!
1 नाङ्गो घाम नुहाउँदा तपाईंको भिटामिन डी स्तर बढ्छ
2 मुड सुधार गर्दछ
3 तपाईको मुटुको लागि थप स्वास्थ्य
4 अधिक स्वतन्त्रताको भावना
5 मधुमेहबाट बचाउँछ
नाङ्गो घाम नुहाउँदा तपाईंको भिटामिन डी स्तर बढ्छ
यद्यपि यसको लागि लुगा खोल्न आवश्यक छैन, हो कि घाम नुहाउँदा भिटामिन डीको स्तर राम्रो हुन्छ। यो बलियो र स्वस्थ हड्डीको लागि आवश्यक भिटामिन मध्ये एक हो। त्यसैले यसले उनीहरूसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका रोगहरूलाई टाढा राख्छ। यो भिटामिन को लागी धन्यवाद को बिर्सनु बिना शरीर को अन्य कार्यहरु लाई विनियमित गर्न सकिन्छ। किनकि यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण पनि हुन्छ । त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ कि यो तपाईको जीवन र तपाईको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
मुड सुधार गर्दछ
सत्य यो हो कि धेरै मानिसहरूको लागि नग्न सूर्य स्नान सबैभन्दा सकारात्मक अभ्यासहरू मध्ये एक हो। जस्तै यसले सेरोटोनिन बढाउनेछ र यसको साथ, थप एनिमेटेड महसुस गर्न। त्यसैले यसले सधैं खुशीको भावनालाई जन्म दिनेछ जुन हामी राम्रोसँग योग्य छौं। तर त्यति मात्र होइन, मुड सुधारको त्यो अनुभूतिसँगै हामी तनावलाई छाडिएको पनि भन्न सक्छौं। हामी सधैं आफैलाई तनावबाट मुक्त गर्न विकल्पहरू खोज्ने प्रयास गर्छौं र निस्सन्देह, सूर्य स्नान सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक हुन सक्छ। तपाईं सधैं धेरै राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ, अधिक आराम र यो सधैं राम्रो समाचार हो।
तपाईको मुटुको लागि थप स्वास्थ्य
यो हाम्रो शरीरको मुख्य मेसिन हो त्यसैले हामीले सधैं यसको अधिकतम ख्याल राख्नुपर्छ। तसर्थ, घाम नुहाउनु मुटुको लागि राम्रो छ किनभने यो भनिन्छ रक्तचाप कम गर्दछ। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि यो विभिन्न हृदय रोगहरु को मुख्य कारणहरु मध्ये एक हो। त्यसोभए, जब हामीले यसलाई खाडीमा राख्छौं, हामी धेरै राम्रो महसुस गर्नेछौं र हामी सबै प्रकारका समस्याहरूलाई टाढा राख्नेछौं। निस्सन्देह, फेरि हामीले थप भिटामिन डी भएको उल्लेख गर्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो हृदयलाई धेरै स्वस्थ बनाउने अर्को हो।
अधिक स्वतन्त्रताको भावना
पक्कै पनि धेरै अवसरहरूमा, जब तपाईं समुद्र तटमा जानुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुन्छ पौंडी पोशाक। कहिलेकाहीँ यो बलियो हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो तल जान्छ र यसले हाम्रो दिनलाई सधैं जटिल बनाउन सक्छ। ठीक छ, नग्न घाममा नुहाउनुको अर्को फाइदा यो हो कि तपाईलाई कुनै समान समस्या हुनेछैन। स्वतन्त्रता तपाईको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो जुन तपाईलाई मनपर्ने काम गरेर र थोरै बढी जीवन कमाउनको लागि एक दिनको मजा लिन सक्षम हुनुहुनेछ, हामीले टिप्पणी गरिरहेका बाँकी सुविधाहरूको लागि धन्यवाद।
के तपाईलाई थाहा छ कि घाममा नुहाउनु पनि मधुमेह रोक्नको लागि राम्रो छ? ठीक छ, यो हो र तपाईंले यसलाई खातामा लिनु पर्छ। निस्सन्देह, यो केहि हदसम्म भिटामिन डीसँग सम्बन्धित छ, जसमा सूर्यसँग सम्बन्धित लगभग सबै चीजको शक्ति छ जस्तो देखिन्छ। जे होस्, यो भिटामिनको राम्रो स्तर हुनु र घाम नुहाउनु सम्बन्धित छ र यसले हाम्रो स्वास्थ्यका अन्य धेरै पक्षहरूमा पनि मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए, यदि तपाईं नग्न घाममा नुहाउने प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पक्कै पनि एउटा समुद्र तट भेट्टाउनुहुनेछ जसले तपाईंलाई विकल्प दिन्छ र तपाईंले प्रत्येक र प्रत्येक फाइदाहरू महसुस गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले टिप्पणी गरिरहेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » नाङ्गो घाम नुहाउने र यसका मुख्य फाइदाहरू